Miteraka Resabe Ny Fikarohana Solitany An-dranomasina Ao Portiogaly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2016 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Español, Português
Mampiahiahy an'ireo mpiaro ny tontolo iainana ny fitadiavana solika sy etona natoraly ao Algarve. Sary: MALP, usada com permissão.
Goavan'ny solitany ao Italia hita ao amin'ny firenena 70 mahery ny Orinasam-pirenena misahana ny etona fandrehitra (ENI). Niara-dia tamin'ny GALP – mpiara-miasa Portiogey izy – mba hitady solitany ao Algarve sy Alentejo ao atsimon'i Portiogaly. Miomana ny hiasa manomboka amin'ny voalohan'ny volana Jolay ireo orinasa ireo, fitsapana voalohany miditra amin'ny fandavahana ny farany ambanin'ny ranomasina, 46 km miala ao amin'ny morontsirak'i Aljezur mba hitady etona fandrehitra. Na izany aza, tsy nahazo marimaritra iraisaina ny tetikasan'ireo vondron'orinasa ireo satria mety hampidi-doza ny toerana voajanahary tahaka ny torapasik'i Alentejo sy Algarve izy ireo, mampisy fiantraikany ratsy amin'ny toekaren'ny faritra, dia ny fizahan-tanin'i Algarve.
Algar ao amin'ny torapasik'i Benagil, Lagoa, Algarve. Sary: Bruno Carlos , lisansa CC BY-SA 3.0
Sahirana amin'ny voka-dratsy ara-tontolo iainana sy ara-toekarena mety aterak'ity fikarohana solitany ity ny fikambanana ao an-toerana, ASMAA (Fikambanan'ny algarviana ho an'ny fampandrosoana ny fikorisana amin'ny onja (surf) sy ny zavatra mifandray amin'ny ranomasina):
Tena sahirana amin'ny voka-dratsy mety ateraky ny fikarohana an-dranomasina eo amin'ny tontolo iainana izahay. Misy atahorana ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny voka-ratsiny ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny faritra.
Nanasonia fifanekena maromaro manome fahazoan-dalana hitrandraka ho an'ireo orinasan'ny solitany ny fitondram-panjakana teo aloha, saingy naneho ny fahavononany hanafoana izany fahazoan-dalana izany ny fitondram-panjakana vaovao. Mikasa hametraka fakàn-kevitra amin'ny vahoaka izy alohan'ny hanapahana hevitra momba ny fivoaran'ny fitadiavana solitany sy etona voajanahary manamorona ny morontsirak'i Algarve sy Alentejo. Fanampin'izany, miampanga ny governemanta ho mikarakara izany fakàn-kevitra izany amin'ny “fanesoana izao tontolo izao ” ny hetsika “Algarva tsy misy solitany” (MALP) izay milaza hoe:
Vao avy nandray fanapahan-kevitra tao anatin'ny fahamehana sy tao anatin'ny mangingina tanteraka indray ny fitondram-panjakana Portiogey tarihan'i Antonio Costa. Te hanatontosa fakàna ny hevi-bahoaka mikasika ny hanomezana na tsy hanomezana fahazoan-dalana ho an'ny orinasa ENI/GALP mba hitady sy hitrandraka solitany manamorona an'i Aljezur ao amin'ny rano ao atsimon'i Portiogaly izy. noho izany, sokajianay ho mampidi-doza ho an'ireo faritra ao Algarve sy Alentejo izany fanapahan-kevitra izany amin'ny voka-dratsy tsy azo ekena eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny mponina ao an-toerana, mangataka amin'ny fitondram-panjakana Portiogey izahay mba haneho ny fanoherany ny fitrandrahana etona sy solitany ao amin'ireo faritra ao atsimon'i Portiogaly. (…)
Fari-dranomasina sy an-tanety misy ny fandavahana solitany kasaina atao ao atsimon'i Portiogaly. Sary: PALP, nahazoan-dalana.
Miantso ny vahoaka mba hanatevin-daharana azy amin'ny hetsi-panoherana eo anoloan'ny lapàn'ny tanànan'i Aljezur ny MALP:
Mamerina indray ny fanoheranay an-kitsipo ny fitrandrahana solitany sy etona voajanahary any an-dranomasina sy an-tanety ao Algarve izahay.
Nanomboka tamin'ny 31 May ny fakàna ny hevi-bahoaka ary hifarana amin'ny 22 Jiona. Mandritra izany fotoana izany, miparitaka ao amin'ny aterineto ny fanangonan-tsonia nataon'ny ASMAA. Miantso ny olom-pirenena izy ireo mba hanasonia ny taratasy misokatra fanoherana ny fandavahana ao amin'ny lemak'i Alentejo izay ho alefa any amin'ny manampahefana tompon'andraikitra.
Fantatra fa hotontosaina ao Aljezur amin'ny 11 jiona ny fifampitantanan'olombelona (filaharana) eo anoloan'ny lapan'ny tanàna ho mariky ny fanoherana:
Antsoina ny mponin'i Aljezur amin'ny 11 Jiona mba hanao fihetsiketsehana amin'ny endrika fifampitantanana ho fanoherana ny fitrandrahana solitany an-dranomasina manamorona ity kaominina ity. Tena zava-dehibe raha maro an'isa faran'izay azo atao ny olona tonga. Hamoaka karatra mena ho an'ireo orinasan'ny solitany (GALP/ENI) sy ny governemanta tsy te-hanaja ny finiavan'ny mponina ao amin'ny faritra te hivelona ao amin'ny Algarve “tsy mila solitany” isika. Tongava hanohitra ny fitrandrahana ny solitany sy ny etona ao amin'ny morontsiraka algarviana.